Nagu saabsan - FAYGO UNION GROUP
FAYGO UNION GROUP waxay leedahay 3 warshadood oo laan ah
Marka hore waa FAYGOBLOW naqshadeynta iyo sameynta mashiinka wax lagu nadiifiyo ee loogu talagalay PET, PE iwm FAYGOBLOW wuxuu leeyahay 5 shati abuuris, iyo 8 nooc shatiyada utility. Mashiinka wax taaj oo kale ee FAYGO PET waa mid ka mid ah naqshadaha ugu dhaqsaha badan uguna tamarta badan adduunka.
Warshadda labaad waa FAYGOPLAST, oo ka samaysa mashiinnada wax soo saarka caagga ah, oo ay ku jiraan khadka tuubbada caaga ka soo baxa, xariiqda ka soo baxa caagga balaastigga ah. Gaar ahaan FAYGOPLAST waxay bixin kartaa xawaare sare ilaa 40 m / min PE, khadka tuubada PPR.
Warshada sedexaad waa FAYGO RECYCLING, oo cilmi baaris ku sameysa teknolojiyada cusub ee dhalada balaastigga ah, dib u warshadaynta filimka iyo pelletizing. Hadda FAYGO RECYCLING wuxuu sameyn karaa ilaa 4000kg / hr. Khadadka dhaqida dhalada PET, iyo 2000kg / hr safka balaastigga filimka
Hadda FAYGO UNION waxay amarro badan ka heshay Alibaba oo ay soo saartay shirkadda 'Trade Assurance'. Hubintayada Ganacsi waxay ka badan tahay USD 2000,000. Marka waxaad xor u tahay inaad wax ka iibsato FAYGO adigoon walwal qabin.
Hada FAYGO UNION GROUP waxay leedahay in kabadan 500 oo macaamiil ah oo ka kala yimid wadamo kala duwan, oo ay kujiraan UK, Spain, Germany, Norway, Switzerland, Italy, Turkey Russia iwm oo ka yimid Yurub, iyo America, Canada, Mexico, Brazil, Venezuela, Chilly iwm oo ka yimid America, iyo Saudi Arabia, Iran, Syria, India, Thailand, Indonesia iwm oo ka yimid Aasiya, iyo macaamiil badan oo ka socda Afrika.
Warshadeenu waxay ku taalaa magaalada Zhangjiagang, waxay dabooshaa aag dhan 26,650 mitir murabac ah. Kaliya waxay qaadataa ku dhowaad laba saacadood oo kaxaynta garoonka diyaaradaha ee SHANGHAI.
Agaasimaheena guud Mr. Figo ayaa aasaasay shirkadeena, oo loogu magac daray Zhangjiagang FaygoUnion Science and Technology Co. Ltd, taas oo "Faygo" macnaheedu yahay macmiilkii ugu horeeyay ee caawiyay isaga halka "Union" ay u taagan tahay asxaabtaas inay iskaashadaan si loo abuuro mustaqbal wanaagsan. Sannadkan, Waxaan kireysanaa aqoon-isweydaarsi magaalada Jinfeng, magaalada zhangjiagang, waxaanan bilownay inaan soo saarno mashiinno caag ah oo loogu talagalay dhuumaha, astaanta, iwm.
Iyada oo ay injineero cusub nagu soo biireen, waxaan bilownay inaan soo saarno mashiinno dib-u-warshadaynta caag ah, oo ay ku jiraan burburin caag ah iyo qadka dharka lagu dhaqo, khadka xarigga lagu garaaco ee caagga ah.
Mr. Figo wuxuu aasaasay shirkad kale oo la yiraahdo Suzhou Yuda Air Compressor Co. Ltd., oo iibisa sumcadda ugu sarreysa hawada ee Shiinaha.
Horumarinta shirkadda awgeed, waxaan kireysaneynaa labo warshadood oo kale si aan u helno meel ku filan oo loogu talagalay soosaarida mashiinada iyo keydinta.
Shirkaddayadu waxay iibsatay warshad ka weyn, oo qabsatay aag 20000 mitir murabac ah oo aan mar dambe kiraynayn warshado. Intaa waxaa dheer, waxaan u beddelnay magaca shirkadda Jiangsu FaygoUnion Machinery Co., Ltd. oo ku yaal magaalada Phoenix, magaalada Zhangjiagang. Waxaan haysannay macaamiil aad iyo aad u badan wixii hadda ka dambeeya.
Markii la balaadhiyay shirkada, waxaan ka dhisnay aqoon isweydaarsi iyo xafiis cusub dhulkeena, intaas waxaa dheer, waxaan dhisnay iskaashi xasiloon oo lala yeesho macaamiisha adduunka oo idil.
Waxaan u guurnay xafiis cusub waxaanan helnay 15 shati oo helay shahaadada qaranka.
Waxaan soo iibsanay warshad kale, oo 1km oo kaliya u jirta aqoon isweydaarsiga hadda halkaasoo qaar ka mid ah mashiinadeena la soo saari doono oo ay ku jiraan mashiinka caaga 、 mashiinka extrusion, mashiinka qashinka dib loo warshadeeyo, mashiinka wax lagu shubo, mashiinka xareynta, kombaresarada hawada, mashiinka goynta dhalada Mashiinka dhalada dhalada
Intii lagu gudajiray faafitaanka Novel Coronavirus, shirkadeena waxay bilawday inay soo saarto mashiinka dharka dhalaalaya ee PP ee loogu talagalay dharka maaskaro, mashiinka maaskaro wajiga kaasoo gaadhay guul weyn isla markaana si joogto ah u soo saaray waji soo saar warshado badan oo macaamiil ah
Dawada xididaysan [2006- 2012]
Daawada xididka leh [2014-]